Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezihlukahlukene » Izizathu Zokudinga Iwebhusayithi Yomthengisi
Uma usendimeni yomsebenzi ojwayelekile njengomthengisi, ungase ucabange ukuthi akubalulekile kuwena ukuba newebhusayithi eyakho. Nokho, kukhona zonke izinhlobo zezinzuzo ekwakheni nasekudaleni isayithi. Lapha, sizobe sibheka ezimbalwa zazo ezingeni eliphezulu lemininingwane.
Heha ithrafikhi yosesho
Emhlabeni wamanje, abantu abaningi ngokwengeziwe bafuna izimpahla namasevisi ku-inthanethi. Uma ungenayo iwebhusayithi, lena yindlela yokumaketha ozogcina uphuthelwe kuyo. Inqobo nje uma isayithi libukeka njengochwepheshe ngokwanele futhi libhala ngokucacile ukuthi kungani uzoba umuntu owufanele umsebenzi, maningi amathuba okuthi uhehe umthamo omkhulu wethrafikhi njengomphumela oqondile walokhu.
Faka Uhlu Ngokucacile Izinsizakalo Zakho
Inzuzo elandelayo enkulu yokuba nesizindalwazi somthengisi ukuthi unenkundla ongabhala kuyo ngokucacile zonke izinsiza zakho. Kwesinye isikhathi, abantu abangenakho konke lokho abanomqondo wezobuchwepheshe badinga ukuthi ibhalwe uma kuziwa ekusebenzeni kahle ukuthi yini ongabanikeza yona. Kunokuba ugxilise lonke lolu lwazi kudokhumenti ephrintiwe njengekhadi lebhizinisi, iwebhusayithi ikunikeza indawo eyengeziwe yokukhombisa ngemininingwane yakho futhi inenzuzo yokuvuselelwa njengoba kudingekile lapho wengeza noma ususa izinsiza kuqoqo lakho.
Nikeza Ukuzethemba Kumakhasimende
Akungabazeki ukuthi iwebhusayithi ingaba yithuluzi elibalulekile lokukhulisa izinga lokwethemba abantu abanalo emandleni akho okwenza umsebenzi kahle. Kanye nokukwazi ukuklelisa zonke izinsiza zakho ngendlela ecacile njengoba sixoxile ekuqaleni kokuthunyelwe kwebhulogi, ungafaka nobufakazi bekhasimende obuthile kanye nezibonelo zezifundo, ezingase zikhulise amazinga okuzethemba nakakhulu. Uma unanoma yiziphi iziqinisekiso ezibonisa ukuthi ufanelekile, lezi kufanele zibekwe obala. Uma njengamanje uthola iziqu, ungakwazi funda kabanzi mayelana nelayisensi ye-HVAC lapha.
Gwema Ukushiya Ngemuva
Kuyiqiniso ukuthi abantu abaningi ngokwengeziwe bashintsha izimpilo zabo ku-inthanethi. Ngenxa yalokhu, izinkampani eziningi ziyaphithizela Qhubeka. Ngisho noma amasevisi owanikezayo akundilinga engaxhunyiwe ku-inthanethi, i-crossover lapha isengagcina ibalulekile. Sikhulume ngokuthi bangaki abantu abenza usesho ku-inthanethi, kodwa futhi kukhona ivolumu enkulu yalabo abasebenzisa inkundla yezokuxhumana kanye nokuthonywa ngokwemvelo ngale ndlela.
Wonke amabhizinisi adinga iwebhusayithi emhlabeni wesimanje, futhi lokhu kufaka phakathi izinkampani ezingabahwebi ukuze bakhe uhlobo lomkhiqizo, bathole isisekelo samakhasimende endawo futhi babonise ubufakazi. Lezi ezinye zezizathu zokuthi kungani kube njalo, futhi umphumela woguquko ongaba nawo ebhizinisini lakho ungagcina ubalulekile futhi umele igxathu elikhulu.